လက်ကားမော်ကွန်းတိုက် - Tele RELAY တစ်ခု
Meghan Markle: le jibe fougueux de l'ex-mari exposé – «Elle est un gros problème,f***…
var brightcoveBrandsafety='4 Sport and specialist news – passed for ad targeting' Trevor est un producteur et agent de talent hollywoodien qui Meghan se sont rencontrés en 2004. Le coupleavécu ensemble à Los Angeles avant de…
ဗီဒီယိုတိုတောင်းသော BGR သည်ဗီဒီယို streaming ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကိုလုပ်သည်
Vanessa Paradis, "Covid-19", သူသည်နှလုံးသားကိုဖွင့်ပေးသော Matthieu Chedid မှနောင်တရ - ဗီဒီယို
Vanessa Paradis, Covid-19, Matthieu Chedid မှသူနောင်တရသောအခါသူ၏စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်သည်။ -------------------------------- ----------- ဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဤဗီဒီယိုသည် https://www.youtube.com/watch?v=OxpH-eHsvQg တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
ဗွီဒီယို - ချုပ်နှောင်ထားစဉ်အတွင်းအိမ်၌အားကစား: Mathilde Gros ၏လေ့ကျင့်ခန်း - …
ခြေရာခံစက်ဘီးစီးခြင်းဆိုင်ရာအထူးကျွမ်းကျင်သူအသက် ၂၀ အရွယ်မိန်းမငယ်သည်သင့်အားတံကောက်ကြောဒဏ်ရာများကိုဖြစ်စေမည့်ရှည်လျားသောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်သင့်အားကမ်းလှမ်းသည်။ ရွေ့လျားမှုအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။ ဒီဗီဒီယိုကိုပထမဆုံးပေါ်လာသည်။
အိန္ဒိယ - အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များအတွက်သရဖူသည်ချမ်းအေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာအစားအစာဖြစ်သည်
Goa ရှိအိုးမဲ့အိမ်မဲ့များအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာ Kerala မှထွက်ပေါ်လာသည့်အစားအစာဖြစ်သည်။ Raju Vellan သည်အနှစ် ၄၀ ကျော် Goa တွင်နေထိုင်ခဲ့ပြီးသူတောင်းစားမလုပ်မီတစ်နေ့တွင်တစ်နေ့လုပ်သားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူရေဒီယိုတစ်လုံး ၀ ယ်နေတယ်။
Barca: Griezmann သည်ကိုင်တွယ်ရမည့်ကြီးမားသောကိုင်တွယ်မှုတစ်ခုယူထားသည်။ FOOT 01
Tele RELAY တစ်ခု 21 ပင်လယ်, 2020 0
Photo Icon Sport တွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မတ်လ ၂၀ ရက်၊ သောကြာနေ့မနက် 20:2020 နာရီတွင်တင်ခဲ့သည်။ ဘာစီလိုနာတွင်တိုက်ခိုက်မှုအားပြန်လည်ရှင်သန်ရန်၊
၁၀။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးအသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။ - ဗီဒီယို
http ယူရီကာကိုစာရင်းသွင်းပါ။ https://goo.gl/tPrHPg ✅။ http https://apple.co/342uAyS ကို podcast သို့စာရင်းသွင်းပါ။ Website ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ - http://lamafache.tv ✅။ မင်းရဲ့စနေနေ့စျေးကွက်ကိုပဲမင်းလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊
အဘယ်သူမျှမ, ကိုကင်း coronavirus, ကြီးမားတဲ့မော်ဒယ် - ကုသရန်မ BGR
ကိုကင်းသည် coronavirus ကူးစက်မှုကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်သည်သို့မဟုတ်ကာကွယ်နိုင်သည်ဟုထူးဆန်းသောကောလာဟလသည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ဆွဲဆောင်မှုရှိလာသည်။ မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များမှာမှားယွင်းသောသတင်းများပါ ၀ င်ပြီး၊
တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားတွင်အနိုင်ရ, Biden သည် Sanders ကိုနင့်နင့်နင့်နင့်နင့်နင်းခမ်းဟခးး
Tele RELAY တစ်ခု 1 ပင်လယ်, 2020 0
ကိုလံဘီယာ၊ SC - ဂျိုးဇက် R. ဘိုင်ဒန်ဂျူနီယာသည်စနေနေ့တွင်တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားမူလတန်းတွင်အဆုံးအဖြတ်ဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူ၏ဂိုးသွင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုပြန်လည်စတင်ကာဆီနိတ်တာဘာနီဆန်းဒါးကိုနှေးကွေးစေသည့်အဓိကပြိုင်ဘက်အဖြစ်သူ့ကိုယ်သူထူထောင်ခဲ့သည်။
PSG - PSG - နေမာအသင်းတိုက်စစ်မှူး L'Equipe ကိုကြီးမားတဲ့ကျရှုံးမှု? - FOOT 01
Photo Icon Sport ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် L'Equipe ကနေမာသည်ပါ ၀ င်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်ဟုဆိုခဲ့သည်